प्रेम गर्नु अपराध होईन्
तस्बीर स्रोतः नागरिक अनलाइन
उदयपुरमा तीन महिने बसाई अत्यन्तै सुखद रहेको थियो, मेरो । तीन महिनाको बसाई एउटा जिल्लालाई बुझ्नका लागि त्यति पर्याप्त समय पक्कै पनि हैन । तर किनकिन मलाई आफ्नो दोश्रो गृहजिल्ला जस्तो लाग्दछ उदयपुर । र, खबरहरुमा म उदयपुरलाई त्यति नै नजिकबाट पछ्याईरहेको हुन्छु, जति म मेरो जिल्लालाई नजिकबाट हेरिहेको हुन्छु । एउटै देशको एकै चौकिल्लाभित्र भएपनि मेरो जन्मजिल्ला र उदयपुरमा धेरै नै फरक पाएको छु मैले । सबै कुरा उस्तै आखिर कहाँको नै हुन्छ र ? तथापी हामीसँग केही संस्कारगत समानता भने पक्कै छन् । र, आज एउटा यस्तै संस्कारगत संयोग भेटे खबरमा । नागरिक दैनिकको अनलाइनसंस्करणमा महेश्वर चामलिङ दाईले लेख्नुभएको खबर – प्रेमलाई निषेध गरिएको खबर ! विस्मातजन्य खबर !
समाचारमा लेखिएको छ – उदयपुरको ताम्लिछा गा.वि.स.को विधालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत एक किशोरले आफ्नै सहपाठी किशोरीलाई प्रेमपत्र लेखेका कारण किशोरीका पिताले मरणाशन्न हुनेगरी कुटपिट गरेछन् । गाउँलेहरु हेरेको हेरै । परिवारका मान्छेहरु पनि जिल्लाराम ! धेरैलाई लाग्न सक्दछ यो सामान्य विषय हो । र, कतिलाई यो पनि लाग्न सक्छ कि आफ्नी छोरीलाई प्रेमपत्र लेख्ने किशोरलाई कुटपिट गरेर किशोरीका पिताले राम्रै गरे । तर मलाई भने समाचार पढेपछि किशोरी र उनका पिताको मनोदशाप्रति दया जागेर आयो । विचरा, प्रेम नबुझेका मनुवाहरु ! हाम्रै वर्तमान सरकार जस्ता रहिछन् यी । सरकार, जो केहि युवाहरुले महिलामाथि हुने र भएका हिंसाको विरोधमा अकुपाई बालुवाटारको अभियान मार्फत सुरक्षाकर्मीहरुलाई गुलाफ उपहार दिन्छन्, सुरक्षाकर्मी “माथिको आदेश”मा धरपकड गर्छ, गिरफ्तार गर्छ । सरकार “गुलाफको भाषा” बुझ्न इन्कार गर्दछ । जनताहरु केहि “प्रेमको भाषा” निषेध गर्दछन् ।
म अस्विकार गर्न सक्दिनँ कि किशोरको यो अध्ययन गर्ने समय हो । पक्कै पनि उनी आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि लगनशील भएर अध्ययन कार्यमा जुट्नु पर्छ । यसमा मेरो फरक मत हुनै सक्दैन । किन्तु, मेरो भन्नु के हो भने पहिलो कुरो त कक्षा १० मा अध्ययनरत एक किशोरीले आफूलाई परेको समस्या सर्वप्रथम आफैले नै समाधान गर्ने प्रयास त गर्न सक्थिन होलानी ? आफ्ना लागि लेखिएको प्रेमपत्र किन आफ्नो पिताजीलाई दिईन होली ? पूरा आत्माविश्वासका साथ किशोरको प्रेमप्रस्तावलाई नकार्न पनि त सक्थिन नी । तर हामीसँग संस्कारगत त्रुटीहरु छन्, जसको प्रभाव किशोरीमा पनि परेको छ । अर्थात, तीतो यथार्थ यो हो कि केहि अपवादलाई छाड्ने हो भने घरमा हुकुम बाबाकै चल्दछ । सामाजिक विषयसम्बन्धी निर्णयहरुमा पुरुषकै भूमिका अहम् छ । र, नारीहरुलाई नितान्त आफ्नै विषयहरुमा निर्णय गर्न अघोषित बन्देज लागेको छ । त्यसकारण पनि यहाँ किशोरीको एकदम नीजि विषयमा उनका पिताले आफ्नो भूमिका बढि देख्न पुगेकाले यस्तो हर्कत हुन गएको छ । जुन एकप्रतिशत पनि ठीक छैन । एकदम गलत छ ।
मन पार्नु वा माया गर्नु अपराध हैन । यो प्राकृतिक र अपरिहार्य कुरो हो । प्रेम विनाको संसारको म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । यस अर्थमा म स्वयं एक असल प्रेमीका नाताले ती किशोरप्रति मेरो सदभाव छ । किशोरले आफ्नो प्रेमको बदला किशोरीबाट पनि जवरजस्ती प्रेमको अपेक्षा नराख्नुजेलको हदसम्म किशोर गलत हुनै सक्दैनन् । त्यसकारण, यो विषयमा, किशोरीका पिताले प्रेमलाई निषेध गरेर एउटा गम्भीर अपराध गरेका छन् । उनी एक पाको उमेरका ब्यक्ति भएका नाताले कम्तिमा पनि किशोरलाई सम्झाईबुझाई गर्नु आवश्यक थियो । भन्नु जरुरी थियो – यो प्रेमपत्र लेख्ने समय होईन बाबु, आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि मेहनत गर्ने समय हो ! प्रेमपूर्वक उसलाई सम्झाउँदैमा पक्कैपनि उनको प्रतिष्ठामा आँच आउने थिएन । यो एउटा दुःखद समाचार बन्ने थिएन । र, मानिसहरुले उनलाई प्रेमविरोधी मनुवा भनेर चित्रित पनि त गर्ने थिएनन् ।
र, अन्त्यमा मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ – आफ्ना सन्तानसन्ततीको नीजि विषयमा दख्खल दिएर उनीहरुलाई झनै कमजोर नगराउनुस् प्रिय अभिभावकज्यूहरु । प्रेमले केही पनि हानी गर्दैन् । तर जव हामी प्रेमलाई निषेध गर्न शुरु गर्छौ तब हामीबाट विध्वंसको बिजारोपण प्रारम्भ भैसकेको हुन्छ । जसको अन्त्य स्वभाविक रुपमा भयानक र कठोर हुने गर्दछ ।
जय प्रेम !
ho dai ma sahamat chu tapaiko lines haru sanga, maya bastav mai apariharya chij ho jasto lagcha malai pani ra jokoi le jo koi lai pani garna paucha paunu parcha, thik teslai galat dhangale bujera aru lai hani hune kam garnu hundaina...asto lekhda lekhdai laxmi dai yaad aayo, love is all there was,all there is and so there will be...:)
आज दुर्इवटा कुरोले मलार्इ निकै खुशि दिलायो मेरो भार्इबाट । पहिलो यो लेख हेरेर पहिलो प्रतिक्रिया दिने मेरो भार्इ भो, दोश्रो मैले लेखेको कुरोमा सहमत पनि । वास्तबमै हाम्रा प्रिय मित्र लक्ष्मी गुरूले भन्नुभएको प्रेमसम्बन्धी त्यो उदगार निकै नै मार्मीक छ । परन्तु के गर्नु हाम्रो समाजमा प्रेमलार्इ स्वागत गर्ने परिपाटी अझै छैन । बनिसकेको छैन । दुःख लाग्छ भार्इ यस अर्थमा । तर मेरो शुभकामना छ, मेरो भार्इको हुनेवाला ससुरा चाँहि यस्ता नपरून हैं ;)